MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward amazing prizes 2020 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ဆုတွေထူးရှယ် ၂၀၂၀ Lucky Draw
၂၀၂၀နှစ်သစ်ကူးကာလလေးမှာ MPT မှချစ်ခင်လေးစားရပါသော သုံးစွဲသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် “ ဆုတွေထူးရှယ် ၂၀၂၀” Lucky Draw အစီအစဉ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Channelကနေ ၁၀၀၀ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး Toyota Rush Brand New ကားသစ်ကြီး (၂) စီးအပါအဝင် ၂ကျပ်သားရွှေပြားများနှင့် ငွေသား သိန်း(၂၀)ကျပ်အပြင် အပတ်စဉ်တိုင်း 20GBအထိအသုံးပြုခွင့်ကို ၁နှစ်အထိရရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် MPT4U App မှ နှစ်သက်ရာ Package တွေ ဝယ်ယူတိုင်း ထိပေါက်ဂိမ်းကစားခွင့်ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး20GB နှင့်အထက် Data ဆုကြီးပေါင်း ၂၀၀၀ခန့်အပြင် အခြား ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ GB ဆုပေါင်းများစွာ ကိုထိပေါက်ဂိမ်းဆော့ပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း (MPT4U မှလွဲ၍)
ကံစမ်းခွင့်များ(USSD Channel မှတစ်ဆင့်)
ကံစမ်းခွင့်များ(E top-up/ DMS/SDP/Mobile Money စသည်တို့မှတစ်ဆင့်)
< ၁၀၀၀ ကျပ် – –
၁၀၀၀ ~ ၁၉၉၉ ကျပ် (၁) ကြိမ် (၂) ကြိမ်
၂၀၀၀ ~ ၂၉၉၉ ကျပ် (၂) ကြိမ် (၄) ကြိမ်
၃၀၀၀ ~ ၃၉၉၉ ကျပ် (၃) ကြိမ် (၆) ကြိမ်
၄၀၀၀ ~ ၄၉၉၉ ကျပ် (၄) ကြိမ် (၈) ကြိမ်
၅၀၀၀ ~ ၅၉၉၉ ကျပ် (၅) ကြိမ် (၁၀) ကြိမ်
၆၀၀၀ ~ ၆၉၉၉ ကျပ် (၆) ကြိမ် (၁၂) ကြိမ်
၇၀၀၀ ~ ၇၉၉၉ ကျပ် (၇) ကြိမ် (၁၄) ကြိမ်
၈၀၀၀ ~ ၈၉၉၉ ကျပ် (၈) ကြိမ် (၁၆) ကြိမ်
၉၀၀၀ ~ ၉၉၉၉ ကျပ် (၉) ကြိမ် (၁၈) ကြိမ်
၁၀၀၀၀ ~ ၁၉,၉၉၉ ကျပ် (၁၀) ကြိမ် (၂၀) ကြိမ်
၂၀၀၀၀ ~ ၂၉,၉၉၉ ကျပ် (၂၀) ကြိမ် (၄၀) ကြိမ်
၃၀၀၀၀ ~ ၃၉,၉၉၉ ကျပ် (၃၀) ကြိမ် (၆၀) ကြိမ်
၄၀၀၀၀ ~ ၄၉,၉၉၉ ကျပ် (၄၀) ကြိမ် (၈၀) ကြိမ်
၅၀၀၀၀ ~ ၅၉,၉၉၉ ကျပ် (၅၀) ကြိမ် (၁၀၀) ကြိမ်
၆၀၀၀၀ ~ ၆၉,၉၉၉ ကျပ် (၆၀) ကြိမ် (၁၂၀) ကြိမ်
၇၀၀၀၀ ~ ၇၉,၉၉၉ ကျပ် (၇၀) ကြိမ် (၁၄၀) ကြိမ်
၈၀၀၀၀ ~ ၈၉,၉၉၉ ကျပ် (၈၀) ကြိမ် (၁၆၀) ကြိမ်
၉၀၀၀၀ ~ ၉၉,၉၉၉ ကျပ် (၉၀) ကြိမ် (၁၈၀) ကြိမ်
၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (၁၀၀) ကြိမ် (၂၀၀) ကြိမ်
***MPT4U တွင် Mobile Money မှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း အပါအဝင်
MPT4U မှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း
(MPT4U တွင် ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း)
< ၁၀၀၀ ကျပ် –
၁၀၀၀ ~ ၁၉၉၉ ကျပ် (၁) ကြိမ်
၂၀၀၀ ~ ၂၉၉၉ ကျပ် (၂) ကြိမ်
၃၀၀၀ ~ ၃၉၉၉ ကျပ် (၃) ကြိမ်
၄၀၀၀ ~ ၄၉၉၉ ကျပ် (၄) ကြိမ်
၅၀၀၀ ~ ၅၉၉၉ ကျပ် (၅) ကြိမ်
၆၀၀၀ ~ ၆၉၉၉ ကျပ် (၆) ကြိမ်
၇၀၀၀ ~ ၇၉၉၉ ကျပ် (၇) ကြိမ်
၈၀၀၀ ~ ၈၉၉၉ ကျပ် (၈) ကြိမ်
၉၀၀၀ ~ ၉၉၉၉ ကျပ် (၉) ကြိမ်
၁၀၀၀၀ ~ ၁၉,၉၉၉ ကျပ် (၁၀) ကြိမ်
၂၀၀၀၀ ~ ၂၉,၉၉၉ ကျပ် (၂၀) ကြိမ်
၃၀၀၀၀ ~ ၃၉,၉၉၉ ကျပ် (၃၀) ကြိမ်
၄၀၀၀၀ ~ ၄၉,၉၉၉ ကျပ် (၄၀) ကြိမ်
၅၀၀၀၀ ~ ၅၉,၉၉၉ ကျပ် (၅၀) ကြိမ်
၆၀၀၀၀ ~ ၆၉,၉၉၉ ကျပ် (၆၀) ကြိမ်
၇၀၀၀၀ ~ ၇၉,၉၉၉ ကျပ် (၇၀) ကြိမ်
၈၀၀၀၀ ~ ၈၉,၉၉၉ ကျပ် (၈၀) ကြိမ်
၉၀၀၀၀ ~ ၉၉,၉၉၉ ကျပ် (၉၀) ကြိမ်
၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (၁၀၀) ကြိမ်
၃ ~ ၁၀ ကြိမ်
၆ ~ ၂၀ ကြိမ်
၉ ~ ၃၀ ကြိမ်
၁၂ ~ ၄၀ ကြိမ်
၁၅ ~ ၅၀ ကြိမ်
၁၈ ~ ၆၀ ကြိမ်
၂၁ ~ ၇၀ ကြိမ်
၂၄ ~ ၈၀ ကြိမ်
၂၇ ~ ၉၀ ကြိမ်
၃၀ ~ ၁၀၀ ကြိမ်
၆၀ ~ ၂၀၀ ကြိမ်
၉၀ ~ ၃၀၀ ကြိမ်
၁၂၀ ~ ၄၀၀ ကြိမ်
၁၅၀ ~ ၅၀၀ ကြိမ်
၁၈၀ ~ ၆၀၀ ကြိမ်
၂၁၀ ~ ၇၀၀ ကြိမ်
၂၄၀ ~ ၈၀၀ ကြိမ်
၂၇၀ ~ ၉၀၀ ကြိမ်
၃၀၀ ~ ၁၀၀၀ ကြိမ်
နယူးထိပေါက်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် MPT4U App ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို အင်တာနက်အခမဲ့ဖြင့် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။
Google Play Store နှင့် App Store တို့တွင်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
၁။ ဆုတွေထူးရှယ် ၂၀၂၀ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်က ဘာပါလဲ?
ဆုတွေထူးရှယ် ၂၀၂၀ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ဆိုတာ MPT မှ MPT GSM/WCDMA Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် Channel (USSD/ E-Topup/DMS/ SDP/MPT4U / Mobile Money) ဖြင့် မဆို ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ ဆုများကို ကံထူးရန် ကံစမ်းခွင့်များရရှိနိုင်မှာပါ။ ဖုန်းဘေလ်များများဖြည့်တိုင်း ကံစမ်းခွင့်များများရရှိနိုင်ပါတယ်။
၂။ ဆုတွေထူးရှယ် ၂၀၂၀ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ?
၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အပတ်စဉ် ဆုများဖြစ်တဲ့ ရွှေ (၂) ကျပ်သားဆုများ၊ ငွေသား ကျပ်သိန်း၂၀ ဆုများ၊ အပတ်စဉ် 20 GB ဒေတာ (တစ်နှစ်စာ) ဆုများ အပြင် အထူးဆု အဖြစ် Toyota Rush ကားသစ်ကြီးများကိုပါ ကံထူးရန် ကံစမ်းခွင့်များ ရရှိမှာပါ။
ဒါ့အပြင် MPT4U တွင် မည်သည့် Package မဆို ဝယ်ယူ၍ ရရှိသော ထိပေါက်ကစားခွင့်များမှ တစ်ဆင့်လည်း 200 GB Data နှင့် 20 GB Data ဆုကြီးပေါင်း ၂၀၀၀ အပါအ၀င် အခြား Data GB ဆုပေါင်းများစွာ ကိုလည်း ထိပေါက်တွင် ကံစမ်းခွင့် ရနိုင်မှာပါ။
၃။ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာလဲ?
MPT GSM/WCDMA Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများ အားလုံးသည် ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ပါက ကံစမ်းခွင့်များရရှိမှာပါ။
၄။ Base Tariff အသုံးပြုသူများ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ Base Tariff အသုံးပြုသူများလည်း ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဖုန်းငွေဖြည့်လျှင် ကံထူးနိုင်သည့် ဆုများကိုသာ ကံစမ်းခွင့် ရရှိမှာပါ။
၅။ ၃၀၀၀ကျပ် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ထားပါတယ်။ ကံစမ်းခွင့် (၁) ကြိမ်ပဲ ရမှာလား?
မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းတဲ့ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး ဆုများကို ကံစမ်းခွင့်အကြိမ်များ ရရှိမှာပါ။
(USSD မှ တဆင့်)
(E top-up/DMS/SDP/Mobile Money စသည်တို့မှ တဆင့်
၁၀၀၀ – ၁၉၉၉ ကျပ်
၃၀၀၀ – ၃၉၉၉ ကျပ်
၅၀၀၀ – ၅၉၉၉ ကျပ်
၂၀၀၀၀ ~ ၂၉,၉၉၉ ကျပ်
၃၀၀၀၀ ~ ၃၉,၉၉၉ ကျပ်
၄၀၀၀၀ ~ ၄၉,၉၉၉ ကျပ်
၅၀၀၀၀ ~ ၅၉,၉၉၉ ကျပ်
၆၀၀၀၀ ~ ၆၉,၉၉၉ ကျပ်
၇၀၀၀၀ ~ ၇၉,၉၉၉ ကျပ်
၈၀၀၀၀ ~ ၈၉,၉၉၉ ကျပ်
၉၀၀၀၀ ~ ၉၉,၉၉၉ ကျပ်
ဖုန်းဘေလ်များများဖြည့်တိုင်း ဆုများကို ကံထူးခွင့်များ ပိုပြီးရရှိနိုင်မှာပါ။
၆။ MPT4U ကနေ ဖုန်းငွေဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ ကံစမ်းခွင့်များ ဘယ်လိုရှိပါမလဲ။
MPT4U မှ တဆင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ပါက ရရှိမည့် ကံစမ်းခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အနည်းဆုံး (၃)ကြိမ် မှ အများဆုံး
(၁၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၆)ကြိမ် မှ အများဆုံး
(၂၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၉)ကြိမ် မှ အများဆုံး
(၃၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၁၂)ကြိမ် မှ အများဆုံး
(၄၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၁၅)ကြိမ် မှ အများဆုံး
(၅၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၁၈)ကြိမ် မှ အများဆုံး (၆၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၂၁)ကြိမ် မှ အများဆုံး (၇၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၂၄)ကြိမ် မှ အများဆုံး (၈၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၂၇)ကြိမ် မှ အများဆုံး (၉၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၃၀)ကြိမ် မှ အများဆုံး (၁၀၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၆၀)ကြိမ် မှ (၂၀၀) အများဆုံး ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၉၀)ကြိမ် မှ အများဆုံး (၃၀၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၁၂၀) ကြိမ် မှ အများဆုံး (၄၀၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၁၅၀) ကြိမ် မှ အများဆုံး (၅၀၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၁၈၀) ကြိမ် မှ အများဆုံး (၆၀၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၂၁၀) ကြိမ် မှ အများဆုံး (၇၀၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၂၄၀) ကြိမ် မှ အများဆုံး (၈၀၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၂၇၀) ကြိမ် မှ အများဆုံး (၉၀၀) ကြိမ် အထိ
အနည်းဆုံး (၃၀၀) ကြိမ် မှ အများဆုံး (၁၀၀၀) ကြိမ် အထိ
၇။ ကံစမ်းခွင့်ကာလအတွင်း ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဘာတွေ ကံထူးနိုင်မှာလဲ?
ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းတဲ့ ပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး ကံစမ်းခွင့်များ ရရှိမှာပါ။
Toyota Rush ကားသစ်ကြီး (၂)စီး ငွေသား ကျပ်သိန်း၂၀ဆု (၅)ဆု
ရွှေ (၂)ကျပ်သားဆု (၅)ဆု
အပတ်စဉ် 20GB ဒေတာ (တစ်နှစ်စာ) (၈)ဆု
၈။ ဖုန်းဘေလ် (၁၀၀၀) ကို USSD Channel မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ကို MPT4U မှ ထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ ရရှိသော ကံစမ်းခွင့်များမှာ ပေါင်းစည်းသွားမှာပါလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ USSD Channel မှ ရသော ကံစမ်းခွင့် နှင့် MPT4U တွင် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သည့် ပမာဏပေါ် မူတည်၍ ရရှိသော ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့်အတိုင်း ထိပေါက်ဂိမ်းကစားပြီးနောက် ရရှိသည့် ကံစမ်းခွင့်များသည် ပေါင်းစည်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သည့် ပမာဏပေါ် မူတည်၍ ရရှိထားသော မတူညီတဲ့ ကံစမ်းခွင့်များမှာ ပေါင်းစည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ E topup ဖြင့် ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ဖြည့်ပြီး ကံစမ်းခွင့်(၆)ကြိမ် ရရှိထားပါတယ်။ နောက်ထပ် MPT4U Channel မှ ဖုန်းဘေလ် (၁၀၀၀) ကျပ် ဖြည့်လိုက်ပြီး ကံစမ်းခွင့်ကို *224# ကို နှိပ်၍ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ စုစုပေါင်း ကံစမ်းခွင့်မှာ (၆) ကြိမ်သာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
MPT4U မှ ရသော ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့်သည် ထိပေါက်ဂိမ်းကစားရန် ကံစမ်းခွင့်ဖြစ်ပြီး ထိပေါက်ဂိမ်းကစားပြီးနောက် ရရှိလာသော ကံစမ်းခွင့်များသည်သာ ဆုများ ကံစမ်းနိုင်ရန် ကံစမ်းခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို ကံစမ်းခွင့်များနှင့် E top-up မှ ရရှိထားသော ကံစမ်းခွင့် (၆) ကြိမ် ပေါင်းစည်း၍ စုစုပေါင်း ကံစမ်းခွင့်ကို စစ်ဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ငွေဖြည့်ကတ် မဟုတ်သော E top-up မှ ထပ်ပြီး ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ဖြည့်သွင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာပါလဲ။
ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်မှ ဖြည့်သွင်းပြီး ရရှိထားသော ကံစမ်းခွင့် (၃) ခုနှင့် E top-up မှ ဖြည့်သွင်းပြီး ရရှိထားသော ကံစမ်းခွင့် (၆) ခုသည် ပေါင်းစည်းသွားပြီး စုစုပေါင်း ရရှိထားသော ကံစမ်းခွင့်သည် (၉) ခု ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ရရှိထားသော chances များ၏ အရေအတွက်ကို ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်ပါမလဲ။
ရရှိထားသော chances များ၏ အရေအတွက်ကို *224# ကို ရိုက်နှိပ်၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
၁၂။တစ်နေ့လျှင် မည်သည့်အကြိမ်ခန့် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်နိုင်ပါသလဲ။
ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်နိုင်ပါသည်။
၁၃။ ကံစမ်းခွင့်များ၏ မည်သည့် အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါမလဲ။
ကံစမ်းခွင့်များသည် Lucky Draw ကာလ ပြီးဆုံးမှသာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
၁၄။ အရင်တစ်ပတ်က ဖုန်းငွေဖြည့်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ပတ် မဖြည့်မိပါဘူး။ ကံစမ်းခွင့်ရနိုင်ပါသလား။
ကံစမ်းခွင့်ကာလအတွင်းမှာ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်တာနဲ့ ကံစမ်းခွင့်ကာလမကုန်ခင်အထိ Toyota Rush ကားသစ်ကြီးများနှင့် အခြားဆုကြီးများကို ကံစမ်းခွင့် ရနိုင်ပါတယ်။
၁၅။ MPT4U တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး Package ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ ရရှိသော ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့်များ ပေါင်းစည်းသွားပါမည်လား။
မဟုတ်ပါ။ MPT4U တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့် နှင့် MPT4U တွင် package ဝယ်ယူထားသော ကံစမ်းခွင့်သည် ပေါင်းစည်းသွားမှာ မဟုတ်ပါ။
၁၆။ဖုန်းတစ်လုံးမှ အခြားဖုန်းတစ်လုံးသို့ ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးခြင်းသည် ဆုတွေထူးရှယ် ၂၀၂၀ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးမည် ဆိုပါက ဖုန်းဘေလ်လက်ခံရရှိသူ သည် ကံစမ်းခွင့် ရနိုင်ပါမည်။
၁၇။ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) သည် ဆုတွေထူးရှယ် ၂၀၂၀ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) သည် ဆုတွေထူးရှယ် ၂၀၂၀ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် မပါဝင်နိုင်ပါ။
၁၈။ ဆုများ ကံထူးကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ?
အပတ်စဉ် ကံထူးရှင်များနှင့် အထူးဆုကံထူးရှင်များကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်မှ စ၍ အပတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်း ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။
ဆက်သွယ်၍မရသော ကံထူးရှင်များကို စုစုပေါင်း(၃)ရက်အထိ ဆက်လက်ဆက်သွယ်ပါမည်။ ဆက်သွယ်၍မရပါက ကံထူးရှင်အသစ်ကို ထပ်မံရွေးချယ်ပါမည်။
Week (1) ကံထူးရှင်များကို ဒီဇင်ဘာလ(၂၈)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
အပတ်စဉ်ဆုများ – ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆု (၁)ဆု၊ ရွှေ(၂)ကျပ်သားဆု (၁)ဆု၊ တစ်နှစ်စာ အပတ်စဉ် 20GB ဒေတာ (၂ )ဆု
Week (2) ကံထူးရှင်များကို ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
Week (3) ကံထူးရှင်များ နှင့် ပထမအကြိမ် အထူးဆုရှင်ကို ဇန်နဝါရီလ(၁၁)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
အထူးဆု – Toyota Rush (၁) စီး
Week (4) ကံထူးရှင်များကို ဇန်နဝါရီလ(၁၈)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
အပတ်စဉ်ဆုများ – ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆု (၂)ဆု၊ ရွှေ(၂)ကျပ်သားဆု (၂)ဆု၊ တစ်နှစ်စာ အပတ်စဉ် 20GB ဒေတာ (၂ )ဆု
ဒုတိယအကြိမ် အထူးဆုရှင်ကို ဇန်နဝါရီလ (၂၅)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
၁၉။ ကံစမ်းမဲကာလက ဘယ်အထိလဲ?
၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်အထိ။
၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အပတ်စဉ် ဆုများဖြစ်တဲ့ ရွှေ (၂) ကျပ်သားဆုများ၊ ငွေသား ကျပ်သိန်း၂၀ ဆုများ ၊ အပတ်စဉ် 20 GB ဒေတာ (တစ်နှစ်စာ) ဆုများ အပြင် အထူးဆု အဖြစ် Toyota Rush ကားသစ်ကြီး(၂)စီး ကိုပါ ကံထူးရန် ကံစမ်းခွင့်များ ရရှိမှာပါ။
Toyota Rush ကားသစ်ကြီး (၂)စီး ငွေသား ကျပ်သိန်း၂၀ဆု (၆)ဆု
ရွှေ (၂)ကျပ်သားဆု (၆)ဆု
အပတ်စဉ် 20GB ဒေတာ (တစ်နှစ်စာ) (၆)ဆု
အပတ်စဉ် ကံထူးရှင်များကို ၂၀၂၀နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်မှ စ၍ အပတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်း ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။
အထူးဆုကံထူးရှင်များကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၆)ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။
Week (1) ကံထူးရှင်များကို ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
အပတ်စဉ်ဆုများ – ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆု (၁)ဆု၊ ရွှေ(၂)ကျပ်သားဆု (၁)ဆု၊ အပတ်စဉ် 20GB တစ်နှစ်စာ ဒေတာ (၁ )ဆု
Week (2) ကံထူးရှင်များကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၇)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
Week (3) ကံထူးရှင်များကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၄)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
Week (4) ကံထူးရှင်များကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၁)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
Week (5) ကံထူးရှင်များကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၉)ရက်တွင် MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေညာပါမည်။
အပတ်စဉ်ဆုများ – ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆု (၂)ဆု၊ ရွှေ(၂)ကျပ်သားဆု (၂)ဆု၊ အပတ်စဉ် 20GB တစ်နှစ်စာ ဒေတာ (၂)ဆု
Toyota RUSH ကားသစ်ကြီး (၂) စီး အထူးဆုရှင်များကို မတ်လ (၆)ရက်တွင် ရွေးချယ်ကြေညာသွားပါမည်။
အထူးဆုများ – Toyota Rush ကားသစ်ကြီး (၂) စီး
၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၄)ရက်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၉)ရက်အထိ။